बिरामी भेट्न अस्पताल जाँदा कस्ता कुरामा ध्यान दिने? - Everest Dainik - News from Nepal
बिरामी भेट्न अस्पताल जाँदा कस्ता कुरामा ध्यान दिने?
सुमित्रा गुरुङ । बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका परिवार, इस्टमित्र वा साथीभाइ भेट्न जाने मन जसलाई पनि हुन्छ। अस्पतालहरुमा बिरामी भेट्न जानेको भीड नै देखिन्छ। आफ्नो मान्छे बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका बेला भेट्न जानु स्वभाविक पनि हो।
याे पनि पढ्नुस देशभरका ठूला अस्पतालकै प्रयोगशाला न्यूनस्तरका
याे पनि पढ्नुस किन राखिन्छ बिरामीलाई आइसियूमा?
याे पनि पढ्नुस सोलुखुम्बुमा एकै गाउँका ४० बढी बिरामी
१०. यदि तपाईं क्यान्सर बिरामी जसको रोगसँग लड्नसक्ने शक्ति कम छ, त्यस्ता बिरामीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने फलफूल र नपकाएको खानेकुरा लैजानुु हुँदैन। खानेकुरा घरैमा तयार गरेर लाग्दै हुन्नुहुन्छ भने बिरामीले खान हुने र नहुने कुराको जानकारी लिएर मात्र लग्नु होला। उचित पौष्टिक आहारयुक्त खानाले पनि बिरामीको रोग निको पार्न ठूलो भूमिका खेल्छ। स्वास्थ्य खबरबाट
ट्याग्स: अस्पताल, बिरामी